Maninona i Flex sy Apollo no hanjaka | Martech Zone
Maninona no hihomby i Flex sy i Apollo
Alahady 1 aprily 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Omaly hariva dia nandany ny hariva niaraka tamin'ny namako sasany aho.
Ny adiny 3 voalohany dia lany tamin'ny Sisintany miasa amin'ny tranokalan'ny mpanjifa izay manana quirks cross-browser. Ny tranonkala dia nosoratana tamin'ny fomba tonga lafatra sy marina CSS. Na izany aza, miaraka amin'ny Firefox 2 amin'ny PC ny lisitry ny menio misy takelaka dia nisy fiovana pixel ratsy tarehy ary tamin'ny Internet Explorer 6, iray amin'ireo fomba CSS dia tsy mandeha mihitsy.
Firefox 2 (zahao ilay fiovan'ny piksely hafahafa izay toa saika itombenana):
Izao no tokony ho endriny:
Ny zava-misy izany Apple, Mozilla, Microsoft, ary Opera tsy mahay manoratra rindranasa a Fitsipika momba ny tranonkala tokony hahamenatra azy ireo tsirairay avy. Azoko tsara ny fahafantarana raha toa ka samy manana ny mampiavaka azy ireo ny mpitety tranonkala tsirairay, izay azo tohanana amin'ny alàlan'ny soratanany manokana - saingy izany no zavatra fototra.
Ity dia ohatra tonga lafatra amin'ny antony Apollon ary Flex mahazoa vintana lehibe hamafana ny Internet. Nanoratra aho, roa andro lasa izay Scrapblog, fampiharana voasoratra amin'ny Flex (ary nalefa haingana tany Apollo). Raha mbola tsy nanana fotoana hahitana an'io ianao - andramo - tsy mahagaga izany.
Mihazakazaka i Flex Adobe Flash's browser plugin. Ity dia plugin iray izay 99.9% betsaka amin'ny Internet mandeha (mihazakazaka ianao isaky ny mijery horonantsary Youtube). Mampiasa motera mitovy i Apollo fa mamela anao hihazakazaka eo am-baravarankely iray fa tsy voafetra amin'ny browser fotsiny.
Inona no atao hoe Flex?
From Adobe: Ny rafitra fampiharana Flex dia misy MXML, ActionScript 3.0, ary ny tranomboky Flex class. Mampiasa MXML ny mpamorona mba hamaritana amin'ny fomba voafaritra ny singa ampiasain'ny mpampiasa fampiharana ary hampiasa ActionScript ho an'ny lojika sy fifehezana fomba fanao. Manoratra kaody loharanom-pahalalana MXML sy ActionScript ny mpamorona amin'ny fampiasana ny Adobe Flex Builder? IDE na mpamoaka lahatsoratra mahazatra.
Raha jerena ny fahasosoranay amin'ny fananganana menio tsimoramora navigatera, alao an-tsaina ange ny manangana rindranasa tranonkala iray manontolo izay tohanan'ny mpikaroka rehetra! Amin'ny farany, ny mpamorona dia tsy maintsy manoratra hacks na scripting manokana ho an'ny browser mba hiantohana ny traikefa mitovy na inona na inona karazana browser na birao hitanao fa miasa ianao. Tsy misy olana amin'ny cross-browser ary ny tombony fanampiny amin'ny fandefasana mora foana ny fampiharana any Apollo mba hihazakazaka hiditra na hivoaka ny tranokala.
Ankoatry ny tsy mampatahotra ny endrik'izy ireo ao amin'ny tranokala tsirairay, misy ny tombony hafa. Manoratra ho an'ny Flex tsy mitaky fahaiza-manao amin'ny fomba ofisialy. Heveriko fa izany no mahatonga ny mpandahatra programa matihanina manesoeso amin'ny fampiasana Flex na Adobe. Aleon'izy ireo mandany vola an'arivony dolara amin'ny fampivoarana azy ireo ilay endrika amin'ny ASP.NET izay maka andalana vitsivitsy MXML.
Raha te haharaka amin'ny Flex sy Apollo ianao dia misorata anarana amin'ny bilaogin'i Bill namako.
Paikady ahazoana mpamaky ho an'ny bilaogera vaovao
Technorati Mamelombelona ny Pejy Fitaovana… miaraka amin'ireo Fitaovana Mangatsiaka!
Apr 2, 2007 amin'ny 7: 08 AM
Tsara hoy i Doug. Raha mahazo izany ry zalahy ara-teknolojia dia manantena lehibe kokoa aho fa hisy developer maro kokoa 😉
Apr 4, 2007 amin'ny 3: 28 AM
> Ity dia plugin iray izay mandeha amin'ny 99.9% amin'ny Internet
Azonao atao ny manamarina ny loharanonao momba an'io antontan'isa io ... 🙂
Ity ary, Aprily 2007 ary mbola tsy manana mpanjifa tselatra izay mandeha eo ambanin'ny tontolo desktop Ubuntu x86_64 (AMD64) aho.
Apr 4, 2007 amin'ny 9: 55 AM
Stephen – marina ny anao… statistika tsy mitombina izany. Raha ny marina, izany no antsoina hoe a SWAG.
Miala tsiny amin'izany!
Apr 16, 2007 amin'ny 11: 43 AM
Ity misy rohy momba ny fidiran'ny Flash – miditra amin'ny 84.3% amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny Flash Player 9.
21 Aogositra 2007 à 11:15
Tsara hoy i Doug, Tsara ny fidirana Stephen.
27 Aogositra 2007 à 2:30
Hmm.. Tena mahaliana ity teknolojia ity. Tsy programmer aho, fa rehefa manoratra ianao dia tsy mila izany. Tsara izany, handeha hijery izany aho.
22 Oktobra 2007 à 9:18
lahatsoratra tena mahaliana, hieritreritra momba izany.